बुद्ध एयरको प्लेनमा यात्रा गर्न अब त झनै बढ्यो त्रास, फेरि बाहिरियो यस्तो घटना ! - jagritikhabar.com – jagritikhabar.com
बुद्ध एयरको प्लेनमा यात्रा गर्न अब त झनै बढ्यो त्रास, फेरि बाहिरियो यस्तो घटना !
निजी वायुसेवा कम्पनी बुद्ध एयरमा यात्रा गर्न झनै त्रास बढेको छ । उक्त एयरको जहाजमा समस्या आएपछि बिहीबार काठमाडौं–विराटनगर उडान करिब डेढ घण्टा ढिलो भएको थियो। कम्पनीको ९ एन-एएमएफ कलसाइनको जहाजमा प्राविधिक समस्या आएपछि यात्रुलाई अर्को जहाजमा विराटनगर पठाइएको त्रिभुवन विमानस्थलले जनाएको छ।
बिहीबार बिहान ११ः५० बजेको उडानका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको ९ एन-एएमएफ कलसाइनको जहाजमा प्राविधिक समस्या आएपछि कम्पनीले उक्त विमानको यात्रुलाई १ः१९ बजे ९ एन-एएनएच कलसाइनको जहाजमा विराटनगर पठाएको विमानस्थलले जनाएको छ।
पछिल्लो समयमा बुद्धको जहाजमा निरन्तर रुपमा समस्या आइरहेको छ। बुद्धले जहाजमा आएको प्राविधिक समस्यालाई गोप्य राखेको छ। कम्पनीका सूचना अधिकारी दीपेन्द्रकुमार कर्णले जहाजमा प्राविधिक समस्या आएको बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नआएको बताए। प्राविधिक समस्या आएको बारेमा मलाई कुनै जानकारी छैन, उनले भने।
विमानस्थल र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई समेत बुद्धले जहाजमा आएको खराबीका बारेमा कुनै जानकारी गराएको छैन। सबैभन्दा बढी बजार हिस्सा रहेको बुद्धको जहाजमा पछिल्लो समयमा पटकपटक खराबी आइरहेको छ।
स्रोतका अनुसार कतिपय समस्यालाई कम्पनीले प्राधिकरणका उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा गोप्य नै राख्ने गरेको थियो। तर सोमबार जहाजको पाँग्रा नै नखुलेर अवतरण गर्न नसकेपछि मात्रै बुद्धको जहाजको प्राविधिक समस्या वाहिरिएको थियो।
सोमबार समस्या आएको जहाज अध्ययन प्रतिवेदन नआइ मंगलबारबाटै उडान थालिएको थियो। तर त्यो जहाजका क्याप्टेन र पाइलटलाई भने ग्राउण्डेड गरिएको छ।
स्रोतका अनुसार साउनमा काठमाडौं धनगढी उडानका क्रममा प्राविधिक समस्या आएपछि जहाज बीचबाटै फर्काएर काठमाडौंमा अवतरण गरिएको थियो। यो जहाज बीचबाटै फर्काएर काठमाडौंमा किन अवतरण गरियो भन्ने बारेमा कम्पनीले कुनै जानकारी दिएको छैन। गत सोमबार कम्पनीको जहाजमा विराटनगरसँगै पोखरा उडानमा समेत धुँवा आएको थियो।